कोरोना महामारी आउँदा यसको सम्पूर्ण व्यवस्थापन स्थानीय तहहरुले नै गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म मूर्तरुपमा फिल्डमा काम गरेको स्थानीय तह नै हो । अहिले क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसन बनाउने होइन । किनभने नेपाल सरकारको मापदण्डअनुसार होम आइसोलेशनको व्यवस्था गरिएको छ र त्यसको नियमन स्थानीय तहले गर्ने हो । अहिलेको दोस्रो लहरको कोरोना धेरै नै खतरनाक भएकोले अक्सिजनसहितको आइसोलेसन चाहिएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा निश्चितरुपमा निरहुत गाउँपालिका कोरोनारहित नै हो । अहिले हाम्रो गाउँपालिकामा एक जना पनि कोरोना संक्रमित छैन । तर, यहाँ अहिले कोरोना टेष्ट भइरहेको छैन । टेष्ट हुँदा पक्कै पनि एक दुई जना संक्रमित फेला पर्छन् नै । टेष्ट नहुँदा यहाँ कोरोना छैन जस्तो देखिएको छ ।
पूर्णरुपमा राजधानी भालुवाङ लुम्बिनी प्रदेशको उपयुक्त स्थान हो । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसावले उपयुक्त छ । भालुवाङले मगरात, थारु, अवध, मधेश, मुस्लिम समुदायको समेत बसोबास भएको क्षेत्र हो ।
अब लकडाउन गर्नु हुँदैन, हामी सतर्कता अपनाउनुपर्छ । अब हामीले ठोस नीति निर्देशन ल्याएर कोरोना रोकथामका लागि अगाडि बढ्नुपर्छ । अब हामीले कोरोनासँगै बाँच्न सक्नुपर्छ । किनभने अहिलेसम्म कुनै औषधि वा खोप नआइसकेकोले एक दुई वर्ष हामी सचेत भएरै बाँच्नुपर्छ ।
संघीय सरकारबाट प्राप्त भएका स्वास्थ्य उपकरणहरु भीटीएमलगायत हामीले प्रदेश सरकारमार्फत् प्राप्त गरेका छौं । तर, त्यो पर्याप्त छैन । उपमहानगरपालिका आफैले पनि बजारबाट खरिद गरेर टेष्ट गरिरहेका छौं । यो महामारीका बेला संघीय सरकारबाट जेजति सहयोग प्राप्त हुनुपर्ने त्यो अझै पनि छैन ।
आवश्यक सुरक्षा मापदण्ड अपनाई जनजीवन सहज बनाउनुपर्छ : गंगा पासवान
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) ले विश्वलाई आतंकित बनाइसकेको अवस्थामा कर्जन्हा नगरपालिका पनि अछुतो छैन ।
चुनौती हुँदाहुँदै पनि हामी विचलित भएका छैनौं : रामचन्द्र चौधरी
ठूलो जनघनत्व र क्षेत्रफलको हिसावले कोरोना नियन्त्रणमा चुनौतीहरु छन् । अहिलेसम्म हामीलाई संघीय सरकारले कुनै किसिमको सहयोग गरेको छैन । प्रदेश सरकारले सुरुमा राहतस्वरुप १५ लाख रुपैयाँ दिएको थियो । अहिले जे जति हामी गरिरहेका छौं, स्थानीयस्तरबाट नै गरिरहेका छौं । यसबाट हामी विचलित भएका छैनौं ।
रोगभन्दा पनि भोकबाट मर्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन : अजय कुमार गुप्ता
जबसम्म यसको भ्याक्सिन आउँदैन तबसम्म यो महामारी नियन्त्रण हुनेवाला पनि छैन । तर अब जनजीवन पनि सहज हुनुपर्छ । अहिले सबै क्षेत्र बन्द भएर भोकमरीको अवस्थामा पुग्ने परिस्थिति बन्दैछ । संक्रमणको जोखिम छँदैछ । त्यसैले अब हामी कोरोना सँगसँगै जिउनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले कति खर्च ग¥यो, कहाँ खर्च ग¥यो हामीलाई केही पनि थाहा छैन । प्रदेश सरकारबाट कोरोना रोकथामको नाममा वा स्वास्थ्य सामग्री तथा स्वास्थ्यकर्मी केही पनि पठाएको छैन । कलैया अस्पतालमा प्रदेश सरकारको तर्फबाट न त स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्थापन हुन सकेको छ न त स्वास्थ्य सामग्रीको ।
प्रदेश र संघीय सरकारलाई मृतक र संक्रमितको तथ्यांक मात्रै चाहिन्छ : हरि प्रसाद मण्डल
यस्तो गम्भीर महामारी फैलिरहेको बेलामा सरकार संवेदनशील हुन सकेको छैन । प्रदेशको भूमिका के त यस्तो बेलामा ? प्रदेश र संघीय सरकारलाई दिनको दिन ५ बजेभित्र मृतक र संक्रमितको तथ्यांक मात्रै चाहिन्छ प्रेस मिटमा जानकारी दिनका लागि । त्यसबाहेक अरु केही पनि छैन ।
कोरोनाका कारण मृत्यु भएका व्यक्ति लकडाउनभन्दा पहिला नै आफ्नी श्रीमतीको उपचारका लागि भारत जानुभएको थियो । उहाँ नेपाल आएको १० दिनपछि विरामी पर्नुभयो, त्यसपछि उपचारका लागि धरान जानुभयो । त्यसपछि उहाँको निधन भयो त्यसपछि मात्रै हामीलाई थाहा भयो ।
पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने योजना छ : लुट बहादुर रावत
जनताका इच्छा, आंकाक्षा फरक–फरक हुन्छन् । अहिले हामी ऐन, नियम, निर्देशिका, कानुन, नियमावली निर्माण गर्ने आफैंले कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने गर्दै गर्दा जनताले आशा गरेका इच्छा, आकांक्षा पूरा गर्नेगरी काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पनि छौं । यो अवधि होइन अर्को एउटा पाँच वर्षे अवधि काम गर्ने अवसर प्राप्त हुने हो भने बल्ल जनताले महसुश गर्ने गरी काम गर्न सकिएला । यहि अवधिमा नगरपालिकाभित्र रहेका व्याप्त समस्याहरू सबै समाधान गर्न सकिँदैन त्यसको लागि समय चाहिन्छ ।
शान्तिका अग्रदुत गौतम बुद्धको गृहजिल्ला कपिलवस्तुको पश्चिमी क्षेत्रमा अवस्थित ऐतिहासिक स्यूराज क्षेत्र तथा प्रशिद्ध धार्मिक स्थल शिवगढीका नामबाट नामाकरण गरिएको शिवराज नगरपालिका नेपाल सरकारको मिति २०७१।०१।२५ को निर्णयबाट साविकका शिवपुर, विरपुर, चनई, विसुनपुर र जवाभारी गा.वि.स.लाई समावेश गरि स्थापना गरिएको हो । नेपाल सरकारको मिति २०७३।११।२७ को निर्णयले साविकका शिवगढी, थुन्हिया र लालपुर गा.वि.स. गाभेर हालको शिवराज नगरपालिका विस्तार गरिएको हो ।
यो नगरपालिका झापा जिल्लाको मध्य उत्तरमा रहेको छ । कुल क्षेत्रफल १०९.८६ वर्ग कि.मी. रहेको छ । अंक्षाश २६.६८ डिग्री र देशान्तर ८७.९९ डिग्री रहेको छ भने महिला ३२३२३ र पुरूष ३१४९२ गरी कुल जनसख्ंया ६३८१५ रहेको छ । सदरमुकाम भद्रपुर देखि २३ किलोमिटर उत्तरमा रहेको यस नगरपालिकाको पूर्वमा बुद्धशान्ति गाउपालिका र मेची नगरपालिका भने पश्चिममा झापाको कनकाई नगरपालिका र इलामको माइ नगरपालिका रहेका छन् त्यसरी नै दक्षिणमा विर्तामोड नगरपालिका पर्दछ उत्तरमा इलामको रोंग गाउँपालिका रहेको छ ।
स्पष्ट नीति निर्माण नभएकाले कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ । त्यसैले सिंहदरबार अवधारणागतरूपमा छ तर कार्यान्वयन पक्ष बढ्न सकिरहेको छैन । त्यसैले हामीले जनतालाई पूर्णरूपमा सिंहदरबार गाउँमा भन्ने नारालाई अनुभूति गराउन सकिरहेका छैनौं ।
गुणस्तरीय शिक्षा मुख्य प्राथमिकतामा छ : शिवनाथ महतो
हामीले जसरी स्थानीय निर्वाचनपश्चात् सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा भन्ने नारा लगाएका थियौं, त्यो कुरा पूरा गर्न सकेका छैनौं । यो कुरा म स्वीकार गर्छु । तर, त्यसका पूर्वाधारहरू तयार गरिसकेका छौं । मुख्य समस्या भनेको हामीसँग कर्मचारी छैन । हाम्रो नगरपालिकामा जम्मा चार जना कर्मचारी छन् ।
स्थानीय तहमा अहिले पनि संघीय सरकारको अधिपत्य छ : हिराबहादुर खत्री
प्राचीन कोलीय राज्यको राजधानी देवदह नेपालको प्रदेश नं. ५ अन्तर्गत रूपन्देही जिल्लामा पर्दछ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी देखि ३५ किलोमिटर उत्तर पूर्वमा अवस्थित देवदह ऐतिहासिक एवं बुद्धको मावलीस्थलको रूपमा प्रशिद्ध रहेको छ । नेपाल सरकारको २०७१ बैशाख २५ गतेको निर्णय अनुसार साविकका देवदह र केरवानी गा.वि.स. मिलेर देवदह नगरपालिका संचालनमा आएकोमा नेपाल सरकारको मिति २०७३।११।२७ मा प्रकाशित राजपत्रअनुसार साविक सिक्टहन गा.वि.स. थप भइ हालको देवदह नगरपालिका बनेको हो ।